Ny fomba hahombiazan'ny Virtualisation Pro - ITS Tech School
Ahoana ny fomba hahatongavana ho Virtualisation Pro
Ho lasa Virtualisation Pro
1. Atombohy manomboka amin'ny dingana voalohany.
2. Atombohy kely.
3. Mifidiana sefom-pitaovana ary omeo azy io.
4. Raiso ho amin'ny Level Next.
Ny raharaham-barotra Virtualization dia mitombo haingana kokoa noho ny fotoana hafa ao anatin'ny fahatsiarovana vao haingana. Amin'izao fandrosoana maharitra mitohy izao, misy eritreritra sy hevitra tsy tapaka foana hamokaranao ny lohanao.
Misy fomba miavaka amin'ny fisarihan'ny mpahay siansa virtoaly amin'ny fomba mahatalanjona, na izany aza dia manana làlana ho laharam-pahamehana lehibe isika izay hanampy amin'ny fanatontosana ny tantaram-piainanareo. Manome fepetra kely efatra izahay afaka manomboka amin'ny fananganana ny fahaiza-manaonareo ary hanova ho lasa tompon'andraikitra virtoaly.
Raha tadidinao ny tanjona farany hamaritana mazava tsara ny virtoaly iray, tokony ho fantatrao momba ny fitsipika hafa momba ny teknolojia hafa, manomboka amin'ny rafitra server. Ny fanorenana fototra dia tsy hangataka be loatra, kanefa rehefa mandroso ny rafitra virtoaly dia miha-mitombo hatrany ny zava-drehetra. Tianao ny tsy hiady amin'ny fahatsiarovan-drakitra ny Linux, na ny fomba hametrahana mpizara Windows izay tsy handroba. Hahazo tombontsoa manokana ianao amin'ny fampiasana angovo eo amin'ny sehatry ny administrateur.
Ny tambajotra, toy izany koa, dia mety ho malama koa. Ny fampiofanana ny CompTIA Network + dia hanome toro-hevitra anao fa ny tontolo virtoaly tsara tarehy dia hanana VLANs sy subnet vitsivitsy hizarana, manamboatra tambajotra fitantanana ho an'ny mpampiantrano anao, ary tambajotra iray mety hiteny amin'ny fizarazarana iombonana, ary koa tambajotra hafa ho anao servisy virtoaly araka ny takiana amin'ny filaminana. Noho ny vintana tsy ahafahantsika manilika ny famerenana ny VLANS, manana sehatra ara-batana vitsivitsy amin'ny server rehetra ho an'ny tambajotra tsirairay isika, izay tsy maintsy hajaina amin'ny sehatra rehetra sy amin'ny fifandimbiasana, na ny fifanintsanana dia tsy hitranga.
Amin'izao fotoana izao, ny zava-drehetra dia midina ao amin'ny 3 am Amin'ireny andalana ireny, tsara kokoa ny manana fahaiza-manao matanjaka ao amin'ny tambajotra.
Nahazo tranonkala iray efa tranainy ve ianao? Tanterak'i! Dilly dally ary mametraka endrika maimaim-poana amin'ny VMware na Microsoft Hyper-V.
Ahoana ny fanontanianao? Tsy miteny izahay. Mandehana manazava izany.
C'mon, ianao mpiara-belona / vavy, miaina amina saina ianao ary mamorona zavatra vaovao! Ankoatra izany, mety haharitra fito andro ny fandraisana anjara amin'ny bilaogy manontolo. Hikorontana ny sakana sy ny fikomiana an-kitsirano, noho izany dia ny fomba lehibe hianaranao sy hialanao dia hamono azy io.
Raha vantany vao vita ianao dia hanana sandoka ahafahanao milalao. Ataovy manamboatra servera Windows iray, ataovy ho mpanara-maso ny habaka, ahitanao ny server IIS ho an'ny sarimihetsika an-trano, ahitanao ny boaty Linux, ary ampidiro ny fampiharana syslog na inona ny innovation mila milalao. TSY AZO AMPIASAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ataovy an-tsaina, io dia mpirenireny, 12 taona-taona taloha, miaraka amin'ny faribiby mirongo fiadiana roa ary indrisy mahery vaika amin'ny fikotranana tsy ara-dalàna.
Voaray ny VMware sy ny Hyper-V. Izy roa ireo dia mpandidy, ny tontolon'ny vokatra izay manintona ny CPU, RAM, ary ny fahafahana mamela ny solosaina virtoaly hampiasa ireny fananana ireny. Raha toa ka misy karazana hypervisors maro karazana, dia ny vMware vSphere sy ny Microsoft Hyper-V no manana ny roa tonta.
Samy mampivelatra ireo singa ireo, ary miaraka, manana ny ankamaroany amin'ny ankabeazan'ny indostria ankapobeny. Samy mendrika ny fianarana, kanefa tokony ho solontenam-panjakana lehibe ianao ao anatin'ny dingana iray. Amin'ny fotoana tsy ahafahanao mihazakazaka toeram-pivarotana Microsoft, Hyper-V dia fanapahan-kevitra tsy azo lavina, indrindra fa noho ny antony mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny famerenana Windows Server hatramin'ny 2008. Raha toa ka tsy manana solosaina Linux na liana amin'ny zavatra tsy Microsoft ianao dia jereo ao amin'ny vSphere.
Na izany na tsy izany, ny CBT Nuggets dia nanome toky anao noho ny zavatra rehetra ilainao. Ny Microsoft dia mirakitra tanteraka ny Hyper-V manontolo amin'ny fanambarana MCSA sy MCSE, ary ny fidirana VCP-DCV ny VCP-DCV dia miditra lalina ao vSphere.
Nahazo ny fahaiza-manao, ny sehatra, ary ny certes ianao, noho izany dia tsara ianao amin'ny fomba hanova ny vinavina virtoaly. Rehefa mivoaka ny sehatra virtoaly ianao, ny singa manan-danja lehibe indrindra amin'ny mpampiasa anao ampiasaina dia hanana fidirana avo. Izany dia manamarina ny fahombiazan'ny milina virtoaly izay manomboka amin'ny solosaina ara-batana iray ary eo amin'ny manaraka rehefa miala ny iray.
Misy vidiny lafo ihany anefa, ary manomboka amin'ny fitaovana maoderina izany. Ny fandaniana fanampiny, mazava ho azy, dia midika bebe kokoa ny fividianana amin'ny takiana ambony kokoa. Amin'ity lafiny ity, tokony ho fantatrao ny fiarovana ireo fandrosoana ireo sy ny fomba hampihena ny vidiny sy ny fotoana maharitra, na amin'ny fahadisoam-panantenana sy ny fanamafisana fototra.
Ny Virtualization dia nanova ny IT hatrany ary afaka manampy ny fiantsoana azy amin'ny ankapobeny. Raha toa ianao ka tsy mifandray amin'ny tontolo virtoaly ankehitriny, dia miankina aminao ny manomboka sy mametraka ny ezaka sy ny fahaiza-mandanjalanja hianarana, satria ireo fahaiza-manao izay nahatonga ny fametrahana ambaratonga ho an'ny PRO rehetra.
Fampiofanana mahatalanjona 7 momba ny fanamarinana VMware